Rescatux သည်သင်၏ system ကိုအမြဲကယ်တင်ရန် | Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ operating system တွင်အမှားတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက်စဉ်းစားသော option မှာ operating system ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Hirens boot သို့မဟုတ်အလားတူကိရိယာတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုရန်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းပြproblemနာမှာ၎င်းတို့သည် Linux ဖြန့်ဝေမှုများကိုပြုပြင်ရန်ထက် Windows ပြုပြင်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းသို့ ဦး တည်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
El စီမံကိန်း၏ Rescatux သည် မကြားဖူးသောသူများအတွက် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း တတ်နိုင်သလောက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ သင်၏စနစ်အားကယ်တင်ပါ။ အရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကြီးလေးသောရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကသို့မဟုတ်၎င်းသည်ထပ်မံမစတင်လျှင်၎င်း Rescatux distro သည်လက်ရှိရှိပြီးသားအခြားရွေးချယ်စရာများအကြားကယ်တင်ရှင်အနေနှင့်ဖြစ်လျှင်သင်၏ system ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရန်လူသိများသောကိရိယာများစွာရှိသည်။ မဆိုပျက်ကွက်ဖြေရှင်းရန်အပြင်သတ်မှတ်ပါတယ် ကိရိယာများစုစည်းမှု အသုံးပြုသူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ Linux စနစ်ကို ပြန်လည်ရယူရန် လွယ်ကူစေရန် လုံလောက်သော ကြီးမားသည်။
Rescatux သည် Linux tool တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသင် Linux ဖြန့်ချိမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်ကူညီခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်သည်သာမကပြproblemsနာများရှိသော Microsoft Windows လည်ပတ်မှုစနစ်များသည်လည်းဤဖြန့်ဖြူးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ Operating System နှင့်ပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်း၏နည်းပညာနှင့်ပြုပြင်ရေးအပိုင်းနှင့်သင်အလုပ်လုပ်ပါက Rescatux တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ စနစ်များကို ပြုပြင်ရန်အတွက် စံပြကိရိယာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုအတွက် ထင်ရှားသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် Linux နှင့် Windows ကို တူညီသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင် မျှဝေသောအခါတွင်၊ Windows သည် Linux registry ကို ပျက်စီးစေသည့် အချို့သော စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ပြဿနာများ ရှိနိုင်ပါသည်။. အဲဒီလို ပဋိပက္ခဖြစ်ဖူးရင် ကယ်ဆယ်ရေး နောက်ထပ် ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ သင့်အား ဖြေရှင်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး၊ ရိုးရှင်းသော အဆင့်အနည်းငယ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ထိုပြဿနာကို သင်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MBR ကို မူလအတိုင်း ပြန်ယူပါ။.
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Rescatux ကို dvd သို့မဟုတ် pendrive တွင်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းကို BIOS မှ execute လုပ်ပြီး ရိုးရှင်းသော tool များကို screen ပေါ်တွင်တွေ့ရပါမည်။ သီးခြားပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပါ။ ၎င်းသည်လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်မည်သည့်အရာကိုအသုံးပြုရမည်ကိုပညာရှင်ကဆုံးဖြတ်ရမည့်အဆုံးမဲ့ကိရိယာစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရပါ။
Rescatux က ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးဆောင်သော ဖြစ်နိုင်ခြေများသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ အစရှိတဲ့ အလုပ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ကို အများကြီး ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။:
Linux အသုံးပြုသူ စကားဝှက်များကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။
Windows စကားဝှက်များကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။
စနစ်ဖိုင်များကို စစ်ဆေးပြီး ပြင်ဆင်ပါ။
GRUB နှင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပါ။
Windows MBR ကို ပြန်ယူပါ။
GParted ဖြင့် အပိုင်းများကို ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲပါ။
Photorec ဖြင့် မတော်တဆ ဖျက်လိုက်သော သို့မဟုတ် ဖျက်လိုက်သော ဖိုင်များကို ပြန်လည်ရယူပါ။
sudoers ဖိုင်ကို ပြန်ထုတ်ပါ။
သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် Rescatux ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။, ဒီမှာ သင်ရှာတွေ့ပြီးအကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်းသည်ကြီးမားလွန်းခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရှိသင့်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်သည်ကိုသင်မည်သည့်အခါကမျှမသိခဲ့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Rescatux သည်သင်၏ system ကိုအမြဲတမ်းကယ်တင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ tool ကတော့ ကျွန်တော် Windows မှာ သုံးဖူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါ။ မင်္ဂလာပါ
"Windows က Linux registry ကိုပျက်စီးစေတဲ့စိတ်ရှုပ်စရာပြproblemsနာတွေရှိနိုင်တယ်။ "
Windows သည် partition သို့မည်သည့်အချိန်တွင်ရေးနိုင်မည်နည်း။ Ext3 or 4. ပြီးတော့ Linux registry ကဘာပြောနေတာလဲ။ Linux မှာကိုယ်ပိုင် registry မရှိဘူး
@Renso: အဲဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ ၎င်းသည်အဓိက boot record (MBR) ကိုရည်ညွှန်းသင့်သည်။ 'boot record' ကိုထည့်ပြီးနားလည်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
Deepin Music Player သည် Ubuntu အတွက်အကောင်းဆုံးသောကစားသမားဖြစ်သည်